Insight TV သည်ထောင်ရှိ Streetkings များအတွက် VICE စတူဒီယိုများနှင့်ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဝိပဿနာတီဗီထောင်အတွက် Streetkings များအတွက် Vice စတူဒီယိုနှင့်အတူပူးတွဲထုတ်လုပ်မှုကြေညာ
ဝိပဿနာတီဗီ, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် 4K UHD HDR ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဇာတိ UHD အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူ, ထောင်အတွက် Vice Studios က, Vice ကနေထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးတွဲထုတ်လုပ်မှုက၎င်း၏ gritty အသစ်ကစီးရီး Streetkings ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြေညာသည်။4x ကို 44 မိနစ်ဖြစ်စဉ်များ featuring, ထောင်အတွက် Streetkings စက်တင်ဘာလ 10th အပေါ်ဝိပဿနာ TV ပေါ်မှာဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှဘောလုံးကြယ်ကစားကွင်းမှာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု hone ပန်းခြံများနှင့်တစ်ဦးအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေလမ်းများပေါ်မှာ။ အဖြစ်ကောင်းစွာကမ္ဘာ့အဆင့်မီကစားသမားများတည်ဆောက်ခြင်းအဖြစ်ဤပတ်ဝန်းကျင်မှာအဘယ်သူ၏အသက်တာကိုတစ်ဦးအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဦးတည်သွားလာသူတို့အဘို့တစ်နောက်ခံဖြစ်ကြသည်။ ထောင်ထဲမှာ Streetkings ခုနှစ်, ဝိပဿနာတီဗီကွန်ကရစ်ဆဲလ်၌မိမိတို့အသက်တာ၏အများစုဖြုန်း, ထောင်ထဲမှာတက်အဆုံးသတ်သောသူတို့အပျေါမီးမောင်းထိုးလိုက်တယ်။
တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်အက်ဒွပ်ဗန် Gils, လမ်းဘောလုံးကွင်း၏ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီးတစ်ဦးဘောလုံးဒဏ္ဍာရီနှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်နှင့်မှားယွင်းတဲ့အလှည့် ယူ. အလွန်အဆိုးဆုံးအနေအထားအထိအဆုံးသတ်တဲ့သူပါရမီကစားသမားရှာဖွေနေ, သူတို့ကနေနေတိုင်းပြည်တစ်ထောင်သွားရောက်ကြည့်ရှု။ Ruud Gullit (နယ်သာလန်), Gilberto ဆေးလ်ဗား (ဘရာဇီး), Juan Pablo အိန်ဂျယ် (ကိုလံဘီယာ) နှင့်ကီဗင် Kuranyi (ဂျာမနီ) featuring, ဗန် Gils နိုင်ပါသည်ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်မှာအချို့သောလမ်းရှငျဘုရငျတို့ကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်အခြားသူများအရက်ဆိုင်နောက်ကွယ်မှသူတို့ဟာအကျိုးကျေးဇူးများလမ်းဘောလုံးကွင်းကိုပြလတံ့သောအရာကိုစူးစမ်း အကျဉ်းသားများ၏ဘဝတွေကိုရန်ဆောင်ကြဉ်းနှင့်မည်သို့သူတို့အားကစားအနာဂတ်၌ဒုက္ခထဲကနေကယ်တင်သောအပြုသဘောဆောင်သည့်အတွေ့အကြုံများအပေါ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့ပွဲစဉ်အဘို့ထိုသူတို့လေ့ကျင့်အဖြစ်အက်ဒွပ်နှင့်ဒဏ္ဍာရီကိုအစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲသူတို့ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာသည့်အခါလျှင်သူတို့လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဘယျသို့သောအခိုက်အဖို့ဦးဆောင်အဘယ်အရာသည်အကျဉ်းသားနောက်ခံအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဖရန့် le Mair, အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ဝိပဿနာတီဗီ, အဘယ်အရာကိုဒီစီးရီးကော်မရှင်နာမှငါ့ကိုမဖြစ်ပေါ်သင့်အိမ်၏ထောင့်လှည့်ပတ်အနည်းငယ်စတုရန်းဖြစ်နိုင်သည် micro ဠာက "လို့ပြောပါတယ်။ သငျသညျကလေးတွေတစ်ခါတစ်ရံတွင် ပို. ပင်ပါရမီအမျိုးသားရေးအသင်းပေါ်အောင်တက်အဆုံးသတ်နှင့်သင်အသက်တာ၌မကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုစေမည်ကြောင်းလေးတွေရှာတွေ့အံ့သောငှါဘောလုံး, ကစားခြင်းကိုရှာဖွေပေမယ့်နေဆဲအမှားပြီးနောက်အမှားလုပ်တက်အဆုံးသတ်နှင့်ဘယ်တော့မှသူတို့ခဲ့ကြပါပြီနိုင်ဘဝရစေခြင်းငှါ, ။ ယခုအသစ်စီးရီးဘဝတစျခုကမှားရွေးချယ်မှုအောင်နေဖြင့်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်ဘောလုံး positive ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်နှင့်မျှမတို့ကိစ္စအဘယ်အရာကိုသူတို့ရဲ့နောက်ခံသို့မဟုတ်အခြေအနေကလူစည်းလုံးဘယ်လောက်ခက်ခဲပြသသာ။ ဒါဟာထိုးထွင်းသိမြင်တီဗီများအတွက်စုံလင်သောမထိုက်မတန်ရဲ့; အရည်အသွေးမြင့်အတွက်အစွမ်းထက်ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အတူခိုင်မာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဇာတ်လမ်းများပေါင်းစပ်ပြီး။ "
Stefan Tieleman, အထွေထွေမန်နေဂျာ, Vice Studios က Benelux, ထောင်အတွက် Streetkings အားကစားအကြောင်းကိုရုံစီးရီးမဟုတ်ပါဘူး "ဖြည့်စွက် - ကသက်ရောက်မှုအားကစားဖြစ်အံ့သောငှါသမျှဇာတ်စင်မှာတစ်စုံတစ်ဦး၏ဘဝအပေါ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပြသထားတယ်။ အဆိုပါထိုးထွင်းသိမြင်, အခွက်တဆယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု Vice ကနေလာမယ့်အတူနက်ရှိုင်းသောကွန်နက်ရှင်အပေါ်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, ငါတို့ကမ္ဘာအနှံ့ဝိပဿနာတီဗီကြည့်ရှုဖို့ဘောလုံးအပေါ်တစ်ဦးလတ်ဆတ်သစ်ယူရောက်စေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ "
4K အဖြစ်အပျက် isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows အားကစား UHD က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-08-15
ယခင်: IBC 2019 မှာသရုပ်ပြခံရဖို့ Quicklink အဝေးမှအိုင်ပီ Commentary
နောက်တစ်ခု: စတူဒီယိုလက်ထောက် Manager ကို